टाढाको टाढामा, महिलाहरु मा छोटो कपाल उत्तम संकेत छैन। सामान्यतया कालो जादूको आरोप लगाइने चुचुराहरू छोटो थियो। हाम्रो दिनमा, छोटो कपाल काटेर महिलाहरु सँग एक प्रकारको जादुई नोट छ। उदाहरणको लागि, तिनीहरू आफैंलाई ध्यान आकर्षित गर्न गाह्रो छैन, यसरी आफ्नो कामुकता, परिष्कृत र साहस कब्जा गर्न। त्यसैले चलो हेर्नुहोस् कि केटीहरूको लागि कस्तो स्टाइलिश छोटो कभर कर्ट 2014 मा उपयुक्त हुनेछ।
स्टाइलिश महिलाको छोटो कपाल
यदि तपाईंले पहिले नै छोटो कपालसँग प्रयोग गर्नुभएको छैन भने, त्यसपछि यो एक पेशेवर स्टाइलिस्ट मार्न पहिलो पटक सबैभन्दा राम्रो छ। सबै पछि, छोटा बाल कट्टरहरू सबैको लागि होइनन्। उदाहरणका लागि, तिनीहरू आदर्शको लागि एक गोल वा ओरालो अनुहारको आकारमा महिलाहरूको लागि उपयुक्त छन्, तर वर्ग वा त्रिकोण आकारको धारकहरूले त्यस्तो प्रयोगमा राम्रोसँग सोच्नु पर्छ। एउटा सानो कपाल कट्टरले अनुहारमा अनुहार दिन्छ। यसैले एक सुन्दर अनुहारको मालिकसँग डर छ कि छैन।
छोटो कपालको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय कपाल बाल क्यान्सर बीन मानिन्छ। यसको मुख्य फाइदा हो कि यो अनुहार अंडाकार को दृश्यहीन रूप देखि खिंचाव गर्न सक्षम छ। यस्तो कपाल कचौराको साथ, पीठो र सिधा क्लासिक ब्वाईजले राम्रोसँग मेल खान्छ। स्टाइलिश बॉबले धेरै सितारहरू मन परायो, उदाहरणका लागि जेनी मेकार्टनी, हेइडी क्लम, केइरा नाइटले, जेनिफर एनिस्टन र अरू धेरै।
आज, प्रवृति असीमित विवरण र गिरिजाखरी संग एक सार्वभौमिक कास्केड हो। यस्तो कपाल ककटेलले तपाईंलाई विभिन्न शैली बनाउन, धेरै स्टाइल बनाउन अनुमति दिन्छ। तपाईं सजिलै एक आक्रामक रकर्स वा सज्जन रोमान्टिक छवि सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
महिलाहरु को लागि स्टाइलिश छोटो बाल कटौती
सबैभन्दा फैशनेबल र स्टाइलिश छोटो कपाल कपाल हावा र बेकार हुनुपर्छ। विभिन्न रेज, रिबन र बाल क्लिप प्रयोग गर्नुहोस्। एक आकर्षक वर्ग को सामान्यतया एक अमरक क्लासिक माना जाता छ। प्रसिद्ध फैशनपालिका विक्टोरिया बेकम ले लामो समयसम्म आफैले यो अनुकूलित गरेको छ, यसैले उनीहरूलाई हाइलाइट गरे।
स्नातक छोटो कपाल कपाल सुरुचिपूर्ण र कुकुर देखिन्छ। तिनीहरूको साथ, चिकनी चिकनी बनाइएका बुम्बाहरू कुनै पनि लम्बाइको राम्रो तरिकाले संयुक्त छन्।
घुमेको कपाल संग महिलाहरु पनि छोटो कपालहरु संग प्रयोग गर्न सक्छन्। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि "कपाल" रमाईलो कपाल देखेर कत्ति सुन्दर छ।
धेरै छोटो केटाकेटी केशको बारेमा बिर्सनुहोस्, तिनीहरूलाई राम्रो समय सम्म छोड्नुहोस्। यो वर्ष, तपाईले सबै स्त्रीलाई र आकर्षक हेराल्डोको साथमा असर पार्नु पर्छ। यसकारण आफ्नै स्वादमा भरोसा राख्नुहोस् र आफैलाई र अरूलाई मात्र सकारात्मक भावना दिनुहोस्!
प्युट्ट्स प्यान्ट 2016
ग्रीष्मकालीन कपडाका कपडाहरू 2014
सुन्दर स्विडिभ 2015
पोलिश swimwear 2014
Swimsuits एन्टोन 2013
लवली विवाह सम्बन्धी पोशाक 2016
फेशन हाउस डायर
पहेंलो मैनीक्योर 2017 - फेशन ट्रेन्डहरू, रोचक विचारहरू, मूल समाधानहरू
फैशन स्कार्फ 2015
मेकअप च्यानल 2015 को शरद संग्रह
एक जना मायालु व्यक्तिलाई चिन्ता
पाक बोर्डको हेरचाह
ककटेल "मार्गरेटता" - नुस्खा
घुट्ने उच्च सेतो
कसरी फ्राइड झगडाहरू पकाउने?
मासु संग सिसा को लागि नुस्खा
स्ट्रिप ड्रेस 2016
हेर्नुहोस्, वा आमा, आफैलाई राम्रोसँग विचार गर्नुहोस्!
जाडोको छातीको लागि सुत्न
रातो पर्वत ऐश - एक साधारण नुस्खाबाट जाम
बच्चाहरु र वयस्कों को लागि पूल मा खेलहरु
स्वस्थ कुकुर कस्तो प्रकारको नाक हुनु पर्छ?
विवाहको बालबालिका 2014
मल्टीवार्कमा भत्काइयो दूध
डेभीड बेखमले पुरुषहरूको कस्मेटिक्सको आफ्नै ब्रान्ड प्रस्तुत गरे
ताजा माछाहरू किन सपना देखाउँछन्?
चकलेट fondue - नुस्खा
भ्रष्टाचार - यो कसरी खोज्न कसले गर्यो?